အာဖရိက - စည်းလုံးညီညွှတ်မှု၊ အိပ်မက်ထက်ပိုပြီးသိသာထင်ရှား - Afrikhepri Fondation
L ကို ''အာဖရိက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးကျယ်သောအာဖရိက၊ ဤမလိုလားအပ်သောနိုင်ငံများသည်ပိုကောင်းသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိရန်ကွဲပြားသည်။ ဒေါက်တာမာတင်လူသာကင်းကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့စကားပြေပြောဖို့ငါဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ငါဒီနေ့အိပ်မက်မက်ပြီ တစ်နေ့မှာအာဖရိကကကမ္ဘာကြီးကိုစုစည်းပြီးကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ နောက်ဆုံးမှာတော့“ ငါကငါ့ရဲ့ကလေးတွေကိုအတူတူသွားပြီးငါ့ရဲ့ပိုင်ခွင့်ကိုပြန်ယူသွားမယ်” လို့ပြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဝါကျပါ။ ငါ့အိပ်မက်တွေထဲမှာပေါ်လာတယ်
အာဖရိက, ဒီတိုက်ကြီးအသားတစ်ကွက်ကဲ့သို့၎င်း။ မြေယာကိုခွဲဝေရန်လွယ်ကူသည်၊ ကျောင်းသုံးကိရိယာနှစ်ခုလိုအပ်သည်။ ကိုလိုနီနိုင်ငံများနှင့်တူရိယာနှစ်ခု၏ပွတ်တိုက်အားကြားဖြတ်ညှိနှိုင်းမှုကိုမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်။ - ဒါတွေအားလုံးကိုငါယူတယ် ... ပြီးတော့သူကဂျီ ometric မေတြီမျဉ်းကိုအယ်လ်ဂျီးရီးယားတောင်ပိုင်းကိုမော်ရိုကိုကနေစပြီးဆွဲထုတ်ခြင်းဖြင့် - ဒါပေမယ့်Françoisကနယ်စပ်မျဉ်းတစ်ကြောင်းလုံးဆွဲထားသည်! ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ မှန်တယ်၊ ကိုလိုနီအဖြစ်မပေါ်ပေါက်ဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံသဏ္tooာန်သည်ကျွန်ပြုခံထားရပြီး၊ ပေါင်းစည်းထားသောအာဖရိက၏ပုံသဏ္soာန်သည်ညစ်ညမ်းခဲ့ပြီးမကြာခဏဆိုးရွားသည့်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မကြာခဏဖြစ်သော်လည်းအာဖရိကလူငယ်များအနေဖြင့်ဤ“ Utopia” ဟူသောစကားလုံးနှင့်မကြာခဏဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းပြသရန်အရေးကြီးသည် အာဖရိကကိုပေါင်းစည်းခြင်းဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်လာဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်။
မူဝါဒနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအားလုံးထက် ပိုမို၍ အားကောင်းနိုင်ရမည်။ ယူနိုက်တက်အာဖရိကကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုသို့လျှော့ချ။ မရသင့်ပါ။ အဓိကရည်မှန်းချက်မှာအာဏာရလူတန်းစားတစ်စု၏ကြွယ်ဝမှုကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ “ ကဲသာဘုရင်အားကဲသာဘုရင်အားပေးအပ်” ။ ကျွန်ုပ်တို့အားကြီးမြတ်ခွင့်ရရှိရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်ပါသည်။
“ -Qeda” သည်အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သော antihero၊ ဤဆင်းရဲသောအာဖရိကန် (သို့) ဤဆင်းရဲသောအာဖရိကန်ကိုမကြာခဏစော်ကားခံရ၊ အရှက်ရခြင်း၊ ဒီစာအုပ်ကိုအပြီးသတ်ရေးတာဟာအသုံးမကျဘူး၊ ဤကြီးမားသောအာဖရိကညီညွတ်မှုနှင့်အတူ၎င်းသည်ဘောပင်အသစ်နှင့်စာအုပ်အသစ်တစ်ခုတွင်စာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပုံသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်၊ ထပ်မံ၍ စတင်ရန်၊ ရိုးတံများနှင့်ဤနယ်နိမိတ်များအားလုံးကိုလိုချင်။ ပရိုဂရမ်ခွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသောအခွင့်အလမ်းကိုမြင်ယောင်စေသည်။
အာဖရိက, ငါကအများကိန်းအတွက်ချင်တယ်။ နိုင်ငံများစွာ၏အမှားများကသင်ခန်းစာနှင့်သတိပေးချက်များ၊ "ဖြတ်ကျော်ရန်မသင့်သောမျဉ်းကို" မလုပ်ရန်အမှားများကကျွန်ုပ်တို့ကိုအကျိုးပြုလိမ့်မည်။ ပြိုင်ပွဲ၏အယူအဆကိုလုံးဝပယ်ချလိမ့်မည်။ ရည်မှန်းချက်အတွက်သုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်း၊ ဒုတိယအဆင့်တွင်ပါသော“ လူမျိုး” သို့မဟုတ်တိကျသောလူမျိုးစုဖြစ်သည့်ရည်မှန်းချက်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမဆိုတိုက်ကြီး၏ဤအစွန်းရောက်အဖျက်စွမ်းအားများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အာဖရိက၌အဖြူရောင်နှင့်အနက်ရောင် ဟူ၍ မရှိ၊ အာဖရိကသားများသာရှိမည်။ ထိုကဲ့သို့သောဘာသာတရားတစ်ခုသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောနိုင်ငံသားရှိခြင်းနှင့်အာဖရိက၏ကြီးမြတ်မှုကိုသာလိုလားသူတစ် ဦး အာဖရိကရှိ, ထိုအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ဘာသာတရားသည်ကျွန်ုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်မနာလိုသောစိတ်ဖြင့်ထိန်းသိမ်းသည်။ ဘာသာရေးသည်တိုက်ကြီး၏ပingိပက္ခဖြစ်နေသောအကြောင်းတရားများအနက်မှနိုင်ငံရေးတွင်နေရာမရှိပါ၊ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုကိုကြေငြာသည့်မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုမျှမဖြစ်ခြင်းသည်အစွန်းရောက်အုပ်စုများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘာသာရေးအုပ်စုတစ်ခုသည်အခြားတစ်ခုထက် ပို၍ ဦး စားပေးနိုင်သော်လည်းမည်သည့်ကြိုးပမ်းမှုများကိုမဆိုသည်းခံခွင့်ရှိသည်ဟူသောအယူအဆကိုလက်ခံရန်လက်မခံနိုင်သည်မှာသေချာပါသည်။ လောကစနစ်နှင့်တူအောင်ကြိုးစားရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ဘာသာရေးသဘောသဘာဝရှိပါတီများတိုးပွားလာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ကောင်းစွာသိပါသည်။ သို့သျောလညျး, ငါတို့ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်း၏ဒုတိယအဆင့်နေရာရှိသည်သေချာအောင်ရမယ်, အာဖရိကမူဆလင်သို့မဟုတ်ခရစ်ယာန်ရှေ့မှောက်၌။ သို့မဟုတ်လျှင်မဟုတ်ပါကအချို့သောဒေသများတွင်အဓိကဘာသာတရားသည်အာဖရိကညီအစ်ကိုများအကြားရှိငြိမ်းချမ်းရေး၊ အိမ်နီးချင်းကိုချစ်ခြင်းနှင့်၎င်းအားမဖျက်ဆီးခြင်းကဲ့သို့သောစစ်မှန်သောဝိညာဉ်ရေးတန်ဖိုးများကိုသင်ပေးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ခရစ်ယာန်၊ မူဆလင်နှင့်အခြားတရားဒေသနာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အာဖရိကကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ထူထောင်ရန်ဖြစ်သည်။
ပညာရေးလား ဦး စားပေး!
နယ်လ်ဆင်မင်ဒဲလား“ ပညာရေးသည်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အင်အားအရှိဆုံးလက်နက်ဖြစ်သည်။ ကာကွယ်မှုနှင့်မျှဝေမှုကဲ့သို့သောအာဖရိကတန်ဖိုးများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်သင်ကြားပေးရမည်။ မသင်မနေရပညာရေးကိုလက်လှမ်းမီခြင်းအားဖြင့်ကျောင်းထွက်ခြင်းကိုအပြုသဘောဖြင့်လျှော့ချစေနိုင်သော်လည်း၊ ထို့ကြောင့်၎င်းအတွက်ကြီးမားသောမြို့ကြီးများနှင့်အထူးသဖြင့်ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်များရှိကျောင်းများဆောက်လုပ်ခြင်းကို“ တိုးမြှင့်” ရန်လိုအပ်သည်။ ဤအရာအလုံးစုံပညာရေးကိုလက်လှမ်းမီလွယ်ကူချောမွေ့ရန်။ လက်ရှိစိတ်ဓာတ်တွေအများကြီးမပြောင်းလဲသေးဘူး၊ ကလေးတစ် ဦး ကိုအလုပ်ကြမ်းအဖြစ်သုံးနေသေးတယ်၊ သူ့ပညာရေးအတွက်ပေးတဲ့ငွေကိုမိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်ကျွေးမွေးလိမ့်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါအခြေအနေကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ထို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သောမညီမျှမှုကိုရှောင်ရှားရန်မိသားစုမှဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့်ကလေး၏ပညာရေးကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း, ဒါပေမယ့်သူက၎င်း၏သားစဉ်မြေးဆက်ကျောင်းသို့ပေးပို့ဖို့ကတိကဝတ်အပေါ်အခြေအနေအရ။ ဟုတ်ပါတယ်။ လိမ်လည်မှုပုံစံကိုကျွန်တော်မဖယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီကိစ္စမှာသူတို့ကိုကန့်သတ်ဖို့အတွက်ကြားခံမပါပဲကျောင်းထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအတွက်ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ယက်ကိုထူထောင်ရန်သို့မဟုတ်နေထိုင်သောကျောင်းသားများအတွက်နေရာထိုင်ခင်းထားရန်ဘော်ဒါကျောင်းများတည်ဆောက်ရန်အရေးကြီးသည် ဝေးလံသောကျေးရွာများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမြင့်တက်လိုသော။ အချို့သောဝေးကွာသောပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်ဘတ်စ်ကားများငှားရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ကျောင်းသားများအတွက်သာသိုလှောင်ထားသည့်နည်းပြများအတွက်ဘောက်ချာသို့မဟုတ်ကူပွန်များကိုဖြန့်ဝေရန်၊ အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လမ်းလျှောက်ရန်အကွာအဝေးကိုလျှော့ချပြီးဖျက်ဆီးပစ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ခြေလျင်ခရီး၏ဝေးလံခြင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ဖို့အတားအဆီး။
ထို့ကြောင့်ဤအရာအားလုံးသည်အနာဂတ်ကျောင်းသားများသာမကမိဘများကိုပါပညာရေးကိုအခြေခံလက်လှမ်းမီနိုင်ခွင့်ပေးခြင်းကိုအားပေးရန်နှင့်ခိုင်မာသောအာဖရိကတည်ဆောက်မှုကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ စည်းလုံးညီညွတ်သောနှင့် clairvoyant ။
နိုင်ငံရေး။ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားကိုမျက်နှာသာပေးသည့်ဖျက်ဆီးလိုသည့်မူဝါဒများမရှိတော့ပါ။ ဒီမဟာဗျူဟာပျောက်ကွယ်သွားသည်၊ လိုချင်သောအရင်းအမြစ်များကိုလုယူရန်သာရည်ရွယ်သည်၊ ရေနံဆန့်ကျင်ရေးအရောင်းအ ၀ ယ်များ၏သံတမန်ရေးနည်းလမ်းမရှိတော့ပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီကိုဆုံးရှုံးစေသည့်အပြင်ကြိုးများကိုအမှန်တကယ်ထိန်းထားသူကို ထပ်မံ၍ သက်သေပြနေပါသည်။ တချို့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကကိုယ့်အာဖရိကန်ညီအစ်ကိုတွေကိုအာဏာနဲ့အခွင့်ထူးတစ်ခုအတွက်သစ္စာဖောက်တဲ့အလုပ်သမားတွေအကြောင်းပိုစဉ်းစားစေတယ်။
ငါတို့ဘာလိုအပ်သလဲ။ အာဖရိကတိုက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသည့်မူဝါဒတစ်ခုဖြစ်ပြီးအုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုစီနှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာနေထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည့်အစာခေါင်းပါးခြင်း၊ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါနှင့်ယင်း၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ ထို့ကြောင့်သတ်မှတ်ထားသောဘတ်ဂျက်သည်ကြီးမားသည်ဖြစ်စေမဖြစ်စေမာစီဒီးအသစ်တစ်ခုကို ၀ ယ်ခြင်းထက်တရားမျှတမှုအတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
ဒီနှိမ့်ချတဲ့ဆောင်းပါးကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ဒီအိပ်မက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။ စစ်တိုက်ရမည့်အချိန်ရှိသေးသည်။ သို့သော်တိုက်ပွဲဝင်ရမည့်အချိန်လည်းရှိသည်။ ဤ ၀ မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်အချိန်ကာလသည်အာဖရိကနှင့်သက်ဆိုင်သောစစ်မှန်သောခွဲခြားမှုနှင့်ဆင်တူပြီးတိုက်ကြီးတစ်ခုနှင့်အပြီးအပိုင်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်သာဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကံကောင်းခြင်း၊ သာယာဝပြောမှုနှင့်အောင်မြင်မှုအစေ့များကိုကြဲခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မူတည်သည်။